Iflethi etofotofo nekhuselekileyo phambi kwePlaya Bonita. - I-Airbnb
Iflethi etofotofo nekhuselekileyo phambi kwePlaya Bonita.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLuis Diego
ULuis Diego yi-Superhost
Iflethi okanye indlu ekwicomplex etofotofo nekhuselekileyo ekwimizuzu elishumi ukusuka kwidolophu yaseLimon.
Ngaphambi kwendawo kukho iPlaya Bonita apho unokonwabela ulwandle okanye usele kwenye yeevenkile zokutyela. Ikwanevenkile enkulu ngaphambili.
Indawo ilungele ukuhlala kwakho eLimon okanye xa usendleleni eya kuMzantsi weCaribbean.
Iflethi ikwisitrato ukusuka ePlaya Bonita. Kukho iivenkile zokutyela eziliqela ezikufutshane nakwidolophu enokufikelelwa kwimizuzu elishumi ngemoto. Kukho indawo yokupaka esimahla kule ndlu ibe ziiflethi okanye izindlu ezikwicomplex eziliqela eziza kukwenza uzive ukhuselekile.
4.71 · Izimvo eziyi-52
Ngqukulela esitratweni uza kufumana iPlaya Bonita elona lwandle lihle kwisixeko saseLimon. Kukho iivenkile zokutyela ezintle eziliqela ezikufutshane ibe kwindawo ekujikelezileyo kukho izityalo apho unokubona khona inkawu encinci, iinkawu okanye ii-iguana. Ikwanevenkile enkulu ngaphambili.
Umbuki zindwendwe ngu- Luis Diego
Ndikulungele ukwabelana ngamava akho eLimon. Ndingabanika amacebiso malunga noko unokukwenza kwiCaribbean okanye apho unokuya khona kwisixeko saseLimon. Ungandifowunela efowunini yam ngoWhatsApp. Nangona ndingahlali kule ndlu, ndingaba kwisayithi kwimizuzu emihlanu ukuba ufuna nantoni na.
Ndikulungele ukwabelana ngamava akho eLimon. Ndingabanika amacebiso malunga noko unokukwenza kwiCaribbean okanye apho unokuya khona kwisixeko saseLimon. Ungandifowunela efowunini y…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Limón